Ọkachamara Semalt: Google na-enyere aka iji zere mmegide sitere n'aka ndị na-agba ọsọ
Ndị mmadụ kwesịrị ịmalite ịmata ọnụ ahịa nnukwu ụlọ ọrụ ndị dị ugbu a. A akwaihe atụ bụ ihe Google mere maka onye nta akụkọ bụ onye a na-alụ ọgụ na DDoS siri ike. Ụlọ ọrụ ahụ kpochapụrụ ma kwụọ ụgwọ yaike itinye mbanye anataghị ikike na njedebe.
Brian Krebs bụ onye nchebe nchekwa blog. Mwakpo ahụ malitere mgbe o kpughere yaarụ ọrụ achụmnta ego nke otu ìgwè, onye ahụ meghachitere site na ịbịarịa DDoS (nkesa ịjụ ọrụ) na usoro ya.DDoS abụghị ndị ọhụrụ dị ka ndị na-agba ọsọ na-eji ha site n'oge ruo n'oge. Otú ọ dị, okwu a dị iche, na mbanye anataghị ike dị ike karịamgbe. Krebs kwetara na ọ na-ebutere DDoS ọgụ n'ihu, ma ọ dịghị ihe ọ bụla dị ukwuu.
Artem Abgarian, nke Ọkachamara Onye isi ahịa na-ahụ maka ndị na-eme njem, kwenyere na ihe kpatara nke a bụ na ndị omempụ nwere ngwá agha karịa mgbe ọ bụla tupu ha ebuteiji mezuo ọgụ ha. Ná mmalite, ihe kachasị ewu ewu bụ Windows PC. Ha ga-enye ha ntụziaka iji dọọ spamokporo ụzọ na saịtị onye ahụ na ebumnuche nke ịpị ya na ntanetị. Na iche iche nke online ngwaọrụ online, hackers ugbu aotutu ohere iji kpochapu ha.
N'ọnọdụ Krebs, ndị na-agba ọsọ na-eji botnets mee ka agha ahụ malite. Ha mgbe ahụIbu ohu ụfọdụ IoT (Intanet nke ihe) ngwaọrụ nke blogger..Ha bụ karịsịa igwefoto IP, ndị na-agagharị agagharị, na ndị na-edekọ vidio dijitalụ,ndị niile nwere ohere ịntanetị. Ọtụtụ n'ime ngwaọrụ ndị e dere aha nwere ikikere ma ọ bụ na-enweghị ike chekwaa iji chebe ha site na intrusion.
Ebe nrụọrụ weebụ Krebs bụ isi ihe dị mkpa nke ọmụma maka ndị na-ege ya ntị n'Ịntanetobodo nchekwa. Iji nhọrọ dị iche iche dị ha, dịka e gosiri n'elu, ha jisiri ike kụtuo saịtị ahụ, ma hụ naọ nọgidere ruo mgbe ebighị ebi. Mgbasa DDoS sitere na ndị na-agba ọsọ na-agba ọsọ ọhụrụ. Mwakpo ahụ mere ka ndị na-ege ntị nweta ozi.
N'ebe a, mmadu nwere ike iche ebe Google ruru n'ime ihe a nile. Otu n'imemmelite ndị ọhụrụ sitere n'aka Google bụ na ha malitere "Project Shield". Ihe oru ngo a bu igbado ndi oru nta akukodị ka Krebs. Ọ na-egbochi ha inweta nkwụsị DDoS na ebe nrụọrụ weebụ ha.
Project Shield na-ewepụta onye nta akụkọ ya na ndị ọrụ ya ka ha wee jiri ha mee iheokporo ụzọ ọ bụla na-eduga na weebụsaịtị yana ebumnuche nke imebi ya. Usoro a abughi nani nani ndi oru nta akukoada aja na hackers. Ojiji ya na-agbanyekwa aka ná mba ndị ahụ na-eme ka ihe ha mepụtara jiri ihe DDoS na-awakpo hagọọmentị.
Na mbụ, Krebs nwetara ụlọ ọrụ a maara dị ka Akamai iji lekọta ọdịnaya ya.Otú ọ dị, ụlọ ọrụ nchịkọta ọdịnaya enwekwaghị ike ịchebe ebe nrụọrụ weebụ site na mwakpo dị ukwuu dị ka nke a. Ụlọ ọrụ ọzọgwara Krebs na ụdị ọrụ Akamai nyere ga-efu ya nso $ 200,000 kwa afọ.
Iji kpochapụ mkpirikpi akụkọ dị mkpirikpi, nbuso agha na krebs 'website bu ihe ngosi nkendị dị mkpa mmadụ kwesịrị itinye na nchekwa weebụ. Ọ bụrụ na mmadụ anaghị eji Google maka nzube a, ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enye otu ọrụ ahụ.Site n'iji nke a mee ihe, ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ na-ebelata ihe ize ndụ nke DDoS ọgụ nke ọma, dị ka ndị na-agba ọsọ na-eji ha eme ihe dị ka ihe ike dị ikengwá agha Source .